Gobolka Banaadir oo loo qoondeeyay in Xubno uu ku yeesho Baarlamaanka Sare ee lasoo dhisi doono - iftineducation.com
Gobolka Banaadir oo loo qoondeeyay in Xubno uu ku yeesho Baarlamaanka Sare ee lasoo dhisi doono
iftineducation.com – Heshiis dhigaya in Gobolka Banaadir inuu todoba xubin ku yeesho Baarlamaanka sare ee lasoo dhisi doono ayaa lagu gaaray Kulan Muqdisho lagu qabtay, iyadoo heshiiskan uu soo af-jarayo muran arrintan ka taagnaa.
Heshiiskaan ayaa meesha ka saaraya diidmadii Puntland ay diidanayn in Gobolka Banaadir uu xubno ku yeesho baarlamaanka sare ee dalka, iyadoo Puntland ay sheegtay in Muqdisho ay tahay Caasimadda Dalka ayna ka dhexeyso bulshada Soomaaliyeed oo dhan.
Shirka heshiiskan lagu gaaray ayaa waxaa goobjoog ka ahaa Mas’uuliyiinta Sare ee dalka, Ergayga Midowga Afrika, Wakiilka QM ee Soomaaliya, Guddiga dib u eegista Go’aannadii Heshiiskii Hannaanka doorashooyinka dalka ee lagu gaartay Muqdisho iyo Mas’uuliyiin ka socday Maamul-goboleedyada dalka.
Intii uu kulanku socday, ayaa aad looga dooday sidii Heshiis looga gaari lahaa Xur-gufta ama muranka ka taagan in Banaadir ay xubno ku yeelato Baarlamaanka Sare ee dalka, balse ugu dambeyn heshiis kama dambeys ah ayaa laga gaaray.
Murankan ayaa waxaa u baaqday shalay kulankii baarlamaanka Soomaaliya uu uga hadli lahaa heshiiskan codna ugu qaadi lahaa, iyadoo lagu wado in xildhibaanadu ay maanta kulan ka yeeshaan hannaanka doorasho ee dalka ka dhici doonta 2016-ka.
Dhanka kale, Waxaa lagu wadaa maanta in Muqdisho uu ka dhaco Bannaanbax lagu taageerayo heshiiskan ku aaddan xubnaha Gobolka Banaadir loo qoondeeyay inay ku yeelato baarlamaanka sare ee soo socda.
Ugu dambeyn, Magaalada Muqdisho ayaa waxaa maanta Imaan doona 15-ka xubin ee Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay, kuwaasoo kulammo doorashooyinka dalka ka dhici doono ku aaddan la yeelan doona dhinacyada Siyaasadda Dalka.
Diyaaradda Egypt Air oo laga cabsi qabo inay ku dul bur burtay Badda Medditerranean-ka..
aboowe see kula ahay hadaa iga heshay hoos meelaa kaala soo xariiro iigu soo qor